Iincwadi ezi-5 ngoMeyi 2, 1808 kunye neembono | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Uvavanyo, Iincwadi, Inoveli
Omnye unyaka 2 ngoMeyi ekhumbula i Uvukelo lwabantu baseMadrid ngo-1808 ngokuchasene nomkhosi waseFrance wokuhlala. Olu lukhetho lwe Iincwadi ze-5 ukukhumbula ezo ntsuku. Ukusuka kwiindlela ezahlukeneyo esinazo Ingxelo yakudala kaPérez-Galdós Kwiziqendu zakhe zeSizwe, kunye nengxelo ebhaliweyo, ngoku iphantse yakudala nayo UArturo Pérez-Reverte. Kwakhona indlela eya kubafundi abancinci ngamanye amaqhawe abo. Masibone.
1 Ngomhla wamashumi amabini ananye kwinyanga yoKwindla nango-Meyi-uBenito Pérez Galdós
2 Uvukelo lwango-Meyi 2, 1808-uPablo Jesús Aguilera Concepción
3 Ngomhla we-XNUMX kuMeyi. Isikhalo sesizwe -Arsenio García Fuentes
4 UDaoíz kunye noVelarde, amaGorha kaMeyi 2-uEsteban Rodríguez Serrano
5 Usuku lomsindo-Arturo Pérez-Reverte
Ngomhla we-19 kuMatshi nango-Meyi 2 -Ubenito Pérez Galdós
I-classic yeGaldós yakhe Iziqendu zeLizwe. Iyaphawuleka kuba, ngokungafaniyo neencwadi zakhe ezimbini zangaphambili kwezinye zezehlo ezibalaseleyo kwimbali yaseSpain, apha kuyamangalisa ukuba ziyaqokelelwa Iziganeko ezibini ezibalulekileyo ze-Aranjuez mutiny (Matshi 19, 1808) kunye Imvukelo yaseMadrid ngokuchasene nokuhlasela kwemikhosi yaseFrance (ngoMeyi 2, 1808).
Umbalisi ngu UGabriel de AraceliNgubani oza kulandela ezo ziganeko kwiindawo ezininzi kwiindawo zombini? Ngaba ngamanye amaxesha ungathanda ingqina kananjalo njani okhuphisana naye kumgca wangaphambili, uhlala ekhangela indawo yakhe kwimbali kunye noluntu oluneziphithiphithi ezimjikelezileyo. Kwaye uhlala ekulungele ukuhamba kwintombi yakhe u-Inés naphi na.
Uvukelo lwango-Meyi 2, 1808 - UPablo uYesu Aguilera Concepción
Yiyo inkcazo yeziganeko zolo suku lobuqhawe Okubuhlungu, kunye nezo zenzekileyo ukusukela ekungeneni kweMadrid yamaFrentshi ekupheleni kuka-Matshi 1808. Kwaye kuyabonakala ukuba Imbali esiyikholelwayo okanye esenza ngathi siyayazi.
Ke umbhali uphakamisa eminye imibuzo ngokungathi iDos de Mayo yayisisiganeko esizenzekelayo okanye sasisele sihleliwe. Okanye mangaphi amajoni ajoyina abantu kumlo wabo nxamnye namaFrentshi. Iimpendulo zizama ukunikwa ngu ubungqina babathathi-nxaxheba kunye namangqina loo mini.
Ngomhla we-XNUMX kuMeyi. Isikhalo sesizwe -Arsenio García Fuentes
Esi sihloko sesinye Ukuhlanganiswa kwamakhulu amabali amancinci ahlangulwe ukusuka ekulibalekeni kwamakhulu ezinye iincwadi kunye neefayile. Incwadi yezembali ngohlobo lwenoveli, enefuthe lokuxela ubuntatheli kunye nabalinganiswa, benyama negazi. Phakathi kwabo ULuis Daoíz nobutsha bakhe ukuzikhusela Cádiz ngokuchasene neenqanawa zaseBritane, okanye injongo kaNapoleon Bonaparte Ukuhlasela uSingasiqithi. Konke oku kongezwa kwimizobo yezobugcisa kunye noncwadi lwesixeko, eendaba, ubomi namasiko abemi bawo nomzabalazo wabo ezitratweni.
UDooíz kunye neVelarde, amaHorha kaMeyi 2 -U-Esteban Rodríguez Serrano
Incwadi yeefomathi ezincinci inenxalenye yokubhaliweyo nenxalenye yomsebenzi. Isicatshulwa si ilungiselelwe abantwana ukusuka kwiminyaka eli-9 kwaye uxelele, ngohlobo lwenoveli yabantwana, ibali lezi amaqhawe amabini yeMfazwe yokuZimela.
Usuku lomsindo - UArturo Pérez-Reverte
Esi sihloko sesele iklasikhi yanamhlanje malunga nezo nyaniso. Ibali elingeyonyani kwaye lingazenzi ngathi liyincwadi yezembali, nokuba ibandakanya, umzekelo, idatha efana neengxelo zabantu abafileyo nabenzakeleyo okanye iingxelo zomkhosi.
UPérez-Reverte ufumene impumelelo yakhe yeshumi elinanye ngale nto Ukubalisa amabali okuqaqambileyo kunye neendaba ezimnandi emva koko, ngesimbo esiqhelekileyo esichaza umbhali. Wabaleka kwithoni yokuhlekisa awayesinike yona, umzekelo, kwenye yeencwadi zakhe ngelo xesha: Trafalgar.
Kwaye akazange enze abalinganiswa abaphambiliKunoko, yayiquka amadoda nabafazi abaninzi ababebandakanyekile kwezo ziganeko. Kwaye zonke zinjalo eyiyo ukusuka kumagorha ukuya kumagwala ngamaxhoba nangokubulawa kwabantu. Zonke zinika idatha kunye nobuntu obudidekileyo phakathi kwenyani kunye iimvume zobuxoki umbhali uvumelekile ukuba ayinike umxholo wenoveli.
Kujikeleze, iqabane. Ubona ntoni? ... Bantu bedolophu. Iidemon ezihluphekileyo njengam nawe. Hayi igosa eligciniweyo, hayi umrhwebi osisityebi, hayi umarquis. Andibonanga namnye wabo balwa ezitalatweni. Kwaye ngubani owasithumela eMonteleón? ... Abaphathi ababini abalula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iincwadi ezi-5 ngoMeyi 2, 1808 kunye neembono zayo
I-Penguin Random House yandisa iqela layo lokupapasha kunye no-Ediciones Salamandra